Alphonse Mucha ilay nanome aingam-panahy mahagaga tamin’ny manga sy ny sarimiaina ary ny “tantara an-tsoratra Japoney” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2019 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Italiano, čeština , Español, русский, English
Ampahany avy amin'ny “Moët syChandon“, (1899) nataon'i Alphone Mucha. Sary niparitaka an-tserasera .
Samy nilaza avokoa ireo mpamorona manga, ny sarimiaina ary eny fa na dia ny mpanoratra” tantara an-tsoratra Japoney” ao Japana aza fa nanome aingam-panahy azy ireo ilay Tseky mpanao kantovao sady mpamorona sarimiaina tany ampiandohan'ny Taonjato faha-20, araka ny bilaogin'ny kolontsaina pop Japoney Ichi-Up.
Araka ny Ichi-Up, samy nahazo aingam-panahy avy amin'i Alfons Mucha (1860-1939, fantatra amin'ny teny Anglisy ho Alphonse Mucha) avokoa ireo famoronana Japoney malaza anisan'izany ny Fandraketana ny adin'i Lodoss (ロードス島戦記), Video Sipa Ai (電影少女), GOSICK ary ny Gundam . Mipoitra matetika any amin'ny kolontsaina pop Japoney rehetra any ny aingam-panahy nomeny.
Manazava ny antony nahatonga an'i Mucha nanome aingam-panahy ny kolontsaina Japoney amin'izao fotoana izao ny hetsika Art Nouveau [Kanto vao], izay ahitana an'i Mucha, hetsika izay voataonan'ny Japonisma nandravarava ny tontolon'ny zavakanto Eorôpeana tany amin'ny faramparan'ny taompolo 1800 ihany koa:
Nanamarika [fr] i Markéta Hanova, ilay Tseky Talen'ny Trano Fampirantiana Zavakanto Nasionaly Rakitry ny Zavakanto Tatsinanana :
Voataonan'ny endrin-javakanto Japoney ihany koa i Mucha raha nonina tao Paris. Hitantsika ao amin'ny sariny fa nataony lehibe ny maodelin'ny tiolipa ( ato amin'ity fandravahana ity). Tazantsika amin'ny alàlan'ireo tiolipa ireo tahaka amin'ny alàlan'ny makarakara ny zavatra iray hafa eny amin'ny faravodilanitra- famoronanana mampiavaka manokana hita amin'ny pirinty Japoney.
Any amin'ny Repoblika Tseky, mbola tsaroana sy ankalazaina hatrany ny aingam-panahy nentin'i Mucha sy ny Art Nouveau tamin'ny kolontsaina famoronana Japoney. Tamin'ny taona 2014 , nisy fampirantiana lehibe tao amin'io firenena io momba ny Japonisma nataon'ireo mpanakanto ara-maso Tseky, anisan'izany i Mucha.
Aseho ao Tokyo ao Bunkamura amin'izao fotoana izao ny asakanton'i Mucha ary mandra-pahatapitra ny faran'ny volana Septambra 2019 izany. Tsy manasongadina fotsiny ireo fandravahana maro nataon'i Mucha ity fampirantiana “Timeless Mucha: The Mucha to Manga — The Magic of Line” [Mucha tsy voafetran'ny fotoana: Mucha mankany amin'ny Manga — ny majikan'ny tsipika] ity fa misy ihany koa ireo asakanto isankarazany avy amin'ireo mpanakanto izay nahazo aingam-panahy avy amin'i Mucha. Hitety ireo tanàndehibe maro manerana an'i Japana amin'ny taona 2020 ity fampirantiana karakarain'ny Orina Mpanasoa Mucha ity .